Inogona Kugadziriswa Kutsvaga Mazano Okugadzirisa Achibudirira?
Ita Zvinhu Zvakagadziriswa Nhamba Yako Yokutanga
Chinhu chokutanga chaunofanira kuita paunotanga chirongwa chako che SEO ndechokuisa pfungwa pakugadzira zvinhu zvinokosha, kwenguva refu. Usati wabuda kubudisa zvinyorwa zvako, zvipo zvebhuku, mapepa machena kana zvidzidzo zvekwese vanoita kuti vaone kupfuura 500-word mark. Yeuka, kuburikidza nekubudisa nyaya dzakareba zviri nyore kwauri kuti uite nevadzidzi uye ugovapa kukosha kwechokwadi uye chiitiko chinogutsa. Kuita zvaunotarisira nehurukuro inodzidzisa, inonakidza uye inobatsira yavanogona kubatsirwa nayo ndiyo nzira yakanakisisa yekusimudza maranho ako nekukwezva vatsva vatsva. Nokudaro, kana iwe uchida kuti nzvimbo yako ive yakakosha muGoogle, zvino iwe unogona kuumba zvakadzika zvinyorwa zvinotarisa vashandi zvakadikanwa zvavanoda.
Ramba uchifunga, vateereri vako vangangodarika kana zvinyorwa zvako zvisina kunaka kwavari. Nhamba dzinoratidza kuti vanopfuura 70% vevaverengi vanovhiringidzika apo mawebsite anopa zvinyorwa, matanho, zvipo, zvinyorwa zvisingabatsiri kwavari. Pane zvinopesana, zvinogadzirisa zvinopindura mibvunzo yevaverengi kakawanda inomira mukana wakanaka wekuverengwa. Nokubudisa zvinyorwa zvakadaro, unoratidza vadzidzisi vako une chimwe chinhu chakakosha kuti utaure uye ugogovana navo. Nenzira yakadaro, unowana kuvimba kwevadzidzisi uye unovakurudzira kuva vashandi vako.
Yeuka, iwe unogona kugara uchitarisa kuti zvakadini nzvimbo yako yepaiti yakagadzirwa nekushandisa SEO Web Page Analyzer. Izvi zvinobatsira SEO service ndiyo sarudzo yakakwana kune avo vanoedza kutarisa webhusaiti yavo yehuwandu hwehutano kubva pane usability, kuwanika uye kutsvaga injini yekuona.
Kugadzirisa Mawebhu Webhu
Hazvisi kuramba kuti kunze kwezvinhu zvakadai sekubatana uye huwandu hwemagariro evanhu hunowanzotora pachena apo vanhu vachitaura nezve SEO. Kunyange zvazvo pane peji-peji SEO chikamu chinokosha chekugadzirwa kwewebhu, mumwe haagoni kukanganwa kukosha kweku-peji kukwanisa.
Nyaya yakareba kwenguva yakareba, pa-peji SEO ndiyo tsika yakawanda yekugadzirisa mapeji ega ega (iyo HTML code uye zvinyorwa zvakanyanya) kuti dzive yakakwirira uye dziwane migwagwa yakakosha munjini dzokutsvaga. Kana izvozvo zvichitinhira zvakanyanya uye zvakaoma kwamuri, musatya. Pasi peji SEO haisi nyuzikiliya yenyukireya, uye maitiro eSeO anokwanisa kuvhara zvidzidzo zvaro pasi apa nemazano anobatsira ari pasi apa:
Musoro wepaiti: Musoro wepeji wepaji yepawebhu unofanirwa kuva wakachena uye tsanangudzo yakajeka yezvakanyorwa peji yezvino. Nokuda kwemigumisiro yakanakisisa, shandisai chinyorwa chinokosha mumusoro wako uye usachengetedze kupfuura zviratidzo makumi manomwe.
Tsanangudzo: Tsanangudzo yemashoko inokosha. Inotsanangurwa, inokurudzira inotsanangurwa inokosha pakutsvaga user-kudarika-kubva kuSERPs. Ichengetedze kusvika kune vanhu 160 kana kuti vashoma.
Majekiti eExpositi: URL dzako dzewebhu dzinofanirwa kuva dzakfupi uye dzakakosha. Iva nechokwadi chokuti zviri nyore kuti vanhu vaverenge. Kuwedzera shoko rako rekutanga kune URLs ndechimwe pfungwa yakanakisisa kubva pamutambo wakadaro unobatsira vateereri kunzwisisa nekukurumidza zviri pa peji vasati vafa.
Keyword Frequency: Google inotarisa nhamba yenguva mutsara unokosha unoratidzwa papeji yewebhu. Kushandisa chinangwa chinyorwa kaviri kacho mumuviri weposita yako ndiyo yakakosha yekugadzirisa. Keyword Density Analysis Tool ndeyekusununguka kweSeO service yaungashandisa kunatsiridza shoko rekugovera mukati mechinhu chakasarudzwa chezviri mukati.
Funga nezvekubatanidza mukati
Kubatanidza mukati kunokosha inyanzvi yeSEO iyo isingafaniri kuderedzwa. Mumashoko akajeka, mukati mehutano ndezvokubatanidza izvo zvinotaura kune mamwe mapeji edzimwechete. Intern link is a link that goes from one page to a domain to a different page in the same domain. Tariro iwe unazvo.
Izvi zvinoshandiswa zvinowanzoshandiswa mumugwagwa mukuru. Uyewo, iyo inobatsira zvikuru kune avo vanoita webhusaiti vanoedza kuumba hukuru hwemashoko ewebsite. Zvimwe, mukati mahutano anobatsira kuparadzira kusangana kwejusi kune mawebsite, izvo zvinobatsira nzvimbo dzako. Kuburikidza nekunze kwekubatanidza, iwe unogona kutora pfungwa mbiri: injini yekutsvaga uye vashandisi kune imwe peji pa webhusaiti yako, chii chinounza huwandu hwezvigaro zve SEO.
Kugadzirisa Website Yakagadzirirwa Kuvandudza Mushandisirwo
Maererano nekutsvakurudza kwemazuva ano. Nokuti mazuva ano tsvakurudzo dzakawanda dzinowanikwa pamafaira efoni, uye kushandiswa kwevashandi chinhu chakakosha chinonyanya kukosha muGoogle algorithm, inguva yakakwirira yekufunga nezvemafaira evashambadziri uye kugutsikana.
Kufungisisa kuti chii chinopindira web design? Zvakanaka, zvinogadziriswa webhusaiti yewebhu iwe wese ndezvekupindura kune unhu hwemushandisi uye zvakatipoteredza. Sezvo mushandisi achishandura kubva pa smartphone yavo kuenda kune laptop, nzvimbo yacho inofanira kuchinjwa kuti igare panzvimbo yekugadzirisa, kushamba kwechifananidzo, uye scripting abilities.
Funga kushandisa CSS mavara mapeti, mifananidzo yakagadzirika, uye zviyero zvakagadzirirwa-shanduko kugadzirisa zvinyorwa zvepaiti uye sarudzo zvichienderana nechashandisa. Yeuka, chinangwa chenyu chikuru ndechekusvinura kusingatauki uye ruzivo rwekuverenga kune vese vanoshandisa mafoni uye desktop.
Tsvaga Website Yako
Hapana anoda kumira. Zvose: zvinotsvaga injini nevashandisi vanoda mawebhusayithi anotakura zvakasimba. Zvave zvichiratidzwa kuti kana nzvimbo inopindura zvishoma nezvishoma, vashandisi vachaisiya mumaminitsi anenge gumi.
Nokudaro, nguva inotevera paunenge uine nzvimbo yakagadziriswa yepaiti, tsvaga mikana yekukurudzira webhusaiti yako. Kana iwe ukashandisa mifananidzo yakawanda mumashoko ako uye mapeji epawebhu, vanyengedze. Muchiitiko chaunenge uchishandisa chikwata chakafanana neShokoPress, bvisa mawedzera-ons uye kubvisa micheche isingakoshi. Ichi ndicho chiduku pane zvaunogona kuita kuti utadze nzvimbo yedu.
Kunyange zvazvo SEO inoshanda isingadhuri, hazvirevi kuti iwe unofanira kusiya kupa SEO yako pachako. Panzvimbo yekutsvaga kutengesa kushandiswa kwekutsvaga kwehutano huripo, tambira kune zvinotevera zvinotaurwa pamusoro apa. Havangokubhadharei peneni Source . Usamirira imwe zvakare - tanga SEO yako purogiramu iye zvino!